Otu esi achọta akụkọ sitere na Telegram | Nzukọ mkpanaka
Ka ọ dị ugbu a, anyị niile maara na Telegram bụ otu n'ime ngwa izi ozi kacha mma dị n'ụwa niile. Dabere na obodo ị nọ, a na -ejikarị ya ma ọ bụ na -ejighị ya. Na Spain ọ na -enweta ọtụtụ ndị na -eso ụzọ ekele ọtụtụ teknụzụ ya mana nke kachasị maka nchekwa ya.
Ngwa dị ka nke a dị nnọọ iche na WhatsApp, nke a na -ejedebe naanị n'ịkwado nkwukọrịta n'etiti ndị mmadụ. Na Telegram ị nwere ike ịga n'ihu wee chọpụta ọtụtụ ihe ekele maka ọwa, ihe dị iche na otu anyị ga -akọwa nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị chọpụta ozi sitere na Telegram, ị ga -amụta ekele maka ọwa.
N'ihi na ee, ọ bụrụ na i si na WhatsApp, a ga -eji gị mepụta ndị enyi, ndị ọrụ ibe ma ọ bụ ezinụlọ na ha na -ekwu ebe ahụ, oge. Onye ọ bụla na -enyefe ozi ha ma ọ bụ gif ha, vidiyo, onyonyo, wdg. Mana ọ bụ na Telegram ị nwere ike ịnọ na ọwa na ha na -enye gị ozi ụbọchị niile, dị ka a ga -asị na ọ bụ akụkọ, mana na ngwa mkpanaka gị.
N'ezie, ọ bụghị na enwere ọwa ozi na Telegram, ọ bụ na enwere ụdị isiokwu niile: teknụzụ, egwuregwu vidiyo, anime, egwu, ịgụ na ndepụta ogologo isiokwu nke anyị na -agaghị etinye ebe a n'ihi na ọ gaghị enwe njedebe. Mana anyị nwere ike hapụ gị otu ma ọ bụ nke ọzọ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịbanye, mana nke ahụ ga -emecha. Ugbu a, anyị ga -amata ọdịiche dị n'etiti otu na ọwa wee nye gị ọwa akụkọ ị nwere ike ịnweta na ngwa Telegram.
1 Ọdịiche dị n'etiti ọwa na otu na Telegram
2 Ọwa akụkọ na Telegram
2.1 Ọwa Telegram na ozi izugbe
2.2 Ọwa Telegram na akụkọ teknụzụ
2.3 Ọwa Telegram gbasara akụkọ egwu
2.4 Ọwa Telegram gbasara akụkọ gbasara ihe nkiri na usoro
2.5 Ọwa Telegram na akụkọ egwuregwu mba na mba
2.6 Ọwa Telegram gbasara akụkọ egwuregwu vidiyo na ngwa dị iche iche
2.7 Ọwa Telegram gbasara akụkọ sitere na ngalaba gọọmentị Gọọmentị Spain na nchịkwa
Ọdịiche dị n'etiti ọwa na otu na Telegram
Iji nwee ike ịbanye na ọwa na -agwa gị isiokwu ọ bụla, ọ dị mkpa ka ị mara nke a, n'ihi na ọ bụghị na saịtị niile ị ga -ahụ ozi ma ọ bụ ihe ị na -achọ. Ma otu Telegram na ọwa (ọ bụ ezie na ọ bụ karịa) ha nwere ike nwee ọtụtụ narị ndị ọrụ nọ n'ọrụ. Mana enwere nnukwu ihe dị iche n'etiti ha abụọ ị kwesịrị ịma.
Otu Telegram bụ nkata nke ndị mmadụ mepụtara ebe ị nwere ike ịkekọrịta ihe ọ bụla. Onye ọ bụla nwere ike ikwu okwu. A ga -enwe ndị otu ọha ma ọ bụ ndị otu nkeonwe mana n'ikpeazụ ọ bụ ihe maka onye ọ bụla nkwurịta okwu sitere n'aka ndị nke abụọ, ndị na -emepụta na ndị fọdụrụ. O doro anya na a ga -enwe iwu, ndị nchịkwa na ụdị ihe a, mana n'ikpeazụ na mgbe ị na -akpọghị oku, ị ga -enwe ike ikwu okwu ma ọ bụrụ na ha achụpụghị gị.
N'ụzọ dị iche na ọwa nkwurịta okwu na -esi n'aka onye nchịkwa ruo ọha, mana ọ bụghị site na ọha gaa na onye nchịkwa. Na ọwa Telegram naanị otu onye ga -eziga ozi. Nke a bụ nnukwu ihe dị iche n'etiti otu na ọwa na ebe ahụ ka ị ga -ahụ ọwa ozi na Telegram, egwuregwu vidiyo, ịgụ ihe, onyinye na isiokwu ndị ọzọ anyị gwara gị na mbụ.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ndị otu, Ọwa ndị a bụ nke ọha ma ị nwere ike isonye oge ọ bụla ịchọrọ. Ọ bụrụhaala na ị nwere URL kpọmkwem na ọwa, ị ga -enwe ike ịbanye. Enwere obere nkọwa, taa ọtụtụ ọwa na -arụ ọrụ dị ka otu maka ngwa na -enye gị ohere ijikọ nkata na ọwa. Yabụ, oge ọ bụla ebipụtara ozi ọhụrụ na ọwa, ị ga -enwe ike ịmalite mkparịta ụka n'otu ozi ahụ dịka nzaghachi. Obere enwere mmekọrịta, mana ka anyị kwuo na ozi onye nchịkwa ga na -enwe mmeri ma ga -adịgide.
Ma ugbua ị matara nke a, anyị nwere ike ịga n'ihu nye gị nchịkọta ọwa, malite na akụkọ. N'ọnọdụ ọ bụla, dịka anyị amaghị maka mmasị gị, anyị ga -edepụtara gị isiokwu ndị ọzọ, kemgbe Ị nwere ike nwee mmasị na akụkọ gbasara teknụzụ, egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ọbụna maka iji ohere enyere.
Ọwa akụkọ na Telegram
Iji banye n'ime ha, ị ga -achọ njikọ na ibe weebụ ha ma ọ bụ gaa na Telegram na ịchọ otu na ọwa, pịnye aha ha. Ọ gaghị efu gị ịchọta nke ọ bụla n'ime ha, ebe ọ bụ na ha bụ ọwa nwere puku kwuru puku na -eso kwa ụbọchị nke a na -emelite kwa ụbọchị.
Ọwa Telegram na ozi izugbe
Ọ dị kwa ụbọchị
Ọwa Telegram na akụkọ teknụzụ
Decibels ndị ọzọ
Ọwa Telegram gbasara akụkọ egwu
Egwu Anuel AA
Ọhụụ & Ọganihu
Ọwa Telegram gbasara akụkọ gbasara ihe nkiri na usoro
Ihe nkiri Hollywood HD
Ihe nkiri, usoro na ihe ọchị
Ọwa Telegram na akụkọ egwuregwu mba na mba
Charlie họpụta n'efu
Ọwa Telegram gbasara akụkọ egwuregwu vidiyo na ngwa dị iche iche
Ihe njikwa ochie
Community APK FULL PRO Amụrụ
Ọwa Telegram gbasara akụkọ sitere na ngalaba gọọmentị Gọọmentị Spain na nchịkwa
Ozi Mmụta na FP
BOJA kwa ụbọchị
Ụlọ Nzukọ Obodo Vall d'Uixò
Ụlọ Nzukọ Obodo Sueca
Ụlọ Nzukọ Obodo Calp
Kọmitii Obodo Cártama
Ụlọ Nzukọ Obodo Girona
Nnukwu ụlọ ezumezu Sant Celoni
Ụlọ Nzukọ Obodo Seville
Ụlọ Nzukọ Obodo Seva
Kọmitii Obodo Benalmádena
Ụlọ Nzukọ Obodo Vilaplana
Nnukwu ụlọ ọgbakọ Cullera
Ọgbakọ obodo Conil
Ụlọ Nzukọ Obodo Tordera
Ụlọ Nzukọ Obodo Valldemossa
Ụlọ Nzukọ Obodo Botarell
Ọgbakọ Guadalcanal City Council
Nnukwu ụlọ ọgbakọ Béjar
Ụlọ Nzukọ Obodo Puente Genil
Ụlọ Nzukọ Obodo Velayos
Ọgbakọ obodo Torrebaja
Ụlọ Nzukọ Obodo nke Quart
Ụlọ Nzukọ Obodo Huétor Vega
Kọmitii Obodo Palomares del Río
Kọmitii Obodo Sestao
Nke a bụ obere nlele nke ọnụọgụ ọwa ị nwere ike ịhụ na Telegram. Anyị nwere ike ịga n'ihu mana anyị na -ahapụ gị ka ị jụọ ma ọ bụ jụọ anyị ụdị ụdị ọwa ị chọrọ. Otu ọ dịla anyị agbakwunyere ọwa nke ọtụtụ isiokwu.
Anyị nwere olile anya na edemede a abala uru na site ugbu a gaa n'ihu mara ọdịiche dị n'etiti ọwa na otu Telegram. Mana karịa ihe niile, anyị nwere olile anya na ị chọtala ọwa ozi nke ị nwere mmasị na ya, bụrụ otu isiokwu ma ọ bụ ọzọ. Obi abụọ ọ bụla ma ọ bụ ntụnye, ihe ọ bụla ọ bụ, ị nwere ike hapụ ya na igbe nkọwa ị ga -ahụ n'okpuru. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » telegram » Otu esi agwa gị akụkọ sitere na Telegram